Chii chinonzi Native Advertising? | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 3, 2017 Douglas Karr
Sezvinotsanangurwa neFTC, kushambadzira kwemuno kunonyengera kana paine zvisirizvo zvinomiririra kana kunyangwe paine kusiiwa kweruzivo izvo zvinogona kutsausa mutengi achiita zvine musoro mumamiriro ezvinhu. Icho chirevo chekuzviisa pasi, uye handina chokwadi chekuti ndinoda kuzvidzivirira pamasimba ehurumende.
Federal Trade Commission inotsanangura kushambadzira kwazvino sechero chipi zvacho chine fananidzo nenhau, zvinyorwa zvinowoneka, wongororo yezvigadzirwa, varaidzo, nezvimwe zvinhu zvinoitenderedza online. FTC Native Kushambadzira: Nongedzo Yemabhizinesi
Gore rapera, Lord & Taylor vakabhadhara makumi mashanu epamhepo mafashoni anokurudzira kutumira Instagram mifananidzo yavo vakapfeka yakafanana paisley rokwe kubva kuunganidzwa nyowani. Nekudaro, ivo vakatadza kuzivisa zvavaive nazvo kupihwa mumwe nemumwe anofurira mupfekero, pamwe nezviuru zvemadhora, mukutsinhana nemvumo yavo. Kutyorwa kwega kwega kwekushayikwa kwekuburitswa kwaigona kuve kwakakonzera mutongo wevanhu unosvika kumadhora zviuru gumi nezvisere!
Vanopfuura chetatu chevadhidhi venhau vemadhijitari havaenderane nemitemo yeFTC iyo inotonga webhusaiti zviziviso zvemuno uye zvakatsigirwa zvemukati, maererano kudzidza kwakaburitswa svondo rino neMediaRadar.
Nei Kuzivisa Kwakakomba
Kuziviswa kwekushambadzira kwemuno mutemo muUnited States uye mune dzimwe nyika zhinji. Asi kuburitswa kwehukama nechiratidzo haisi nyaya yepamutemo chete, ndeimwe yekutendeka. Vatengesi vakawandisa vanotenda kuti kuburitswa kunogona kukanganisa shanduko, asi isu hatina kuona izvi zvachose. Vaverengi vedu vanga vagara nesu kwemakore gumi uye vanovimba kuti, kana ndikashambadzira kurudziro yechigadzirwa, kuti ndiri kudaro nedumela rangu pamutsetse.
Kubuda pachena nemutengi kwakakosha, uye zvidimbu zvekusimudzira hazvifanirwe kuratidza kana kureva kune vatengi kuti ivo chero chinhu kunze kwekushambadzira. Kana kuzivisa kuchikosha kudzivirira kunyengedza, kuburitsa kunofanirwa kuve kwakajeka uye kunofanirwa kuve kwakakurumbira. Adhamu Soromoni, Michelman & Robinson
Ini handingamboisa pangozi zita rangu. Muchokwadi, ini ndinokumbirwa rinenge zuva nezuva kushambadzira zvinyorwa uye kubhadharwa kune backlink uye ndinozviramba. Dzimwe nguva, vamiriri vane hushingi hwekukumbira kuti ndinyore chimwe chinhu chisina kuziviswa. Ndinozvinyora zvakare ndovabvunza kuti sei vachitenda kuti kutyora mitemo yemubatanidzwa kwakanaka… uye vanonyangarika uye havambopindura.
Shamwari Chad Pollitt munguva pfupi yapfuura yakaburitsa iyo 2017 Native Kushambadzira Technology Landscape uye yakanga iri feat, ichifamba munzira dzese uye matekinoroji akafuridzirwa uye akabatwa nekushambadzira kwemuno.
Zvinoenderana nemushumo uchangobva kuburitswa neMediaRadar, Vatungamiriri uye Zvidzidzo muNative Kushambadzira, kubvumidzwa uye kudiwa kwekushambadzira kwemuno kwakakwirira zvakanyanya neavhareji yevashambadzi vatsva mazana matanhatu negumi vanoshandisa mhinduro dzemhando dzemukati mwedzi wega
MediaRadar Native Kushambadzira Trend Report
Tags: Adhamu Soromonikuzivisaftcftc kuburitsaInfluencersIshe & TaylorMichelman & Robinsonkushambadzira kwazvino
Zencastr: Nyore Rodha Podcast Kubvunzurudza Pamhepo